DAAWO: Xulka Talyaaniga oo laga soo taageeray Hawada Sare (Space) – Gool FM
DAAWO: Xulka Talyaaniga oo laga soo taageeray Hawada Sare (Space)
Raage September 1, 2017
(Hawada Sare) 01 Sebt 2017 – Xulka Talyaaniga ee Azzuri ayaa farriin nasiib wacan ah looga soo diray xarunta Hawada Sare ee Caalamiga ah, gaar ahaan kulanka Spain.
Cir-bixiyeenka reer Talyaani ee Paolo Nespoli oo haatan saaran saldhigga caalamiga ah ee hawada sare, ayaa u muuqda mid halkaa habeen dambe kala socon doona kulanka adag ee ay Azzurri ku wajihi doonaan kooxda Julen Lopetegui oo ay ku wada ciyaari doonaan Bernabeu.
“Dhamaanba taageerayaasha kubadda cagtoow, waxaa berritoole waa maalin muhim ah oo ay Santiago Bernabeu oo Madrid isku arki doonaan Spain iyo Talyaaniga kulan ka tirsan isreeb-reebka KA2018,” ayuu Nespoli ku yiri muuqaal ay faafifsay xaruntani.
“Italy iyo Spain waxay ugu sarreeyaan guruubkooda, kulankanina waa u muhim usoo bixitaanka Koobka Adduunka, waana hubaa inay dadka Talyaanigu garab joogsan doonaan xulkooda sidii caadiga ahayd.” ayuu daba dhigay cir-bixeen Nespoli oo farriintiisa oo dheer kusoo afmeeray ”Forza Azzurri”.
GOOGOOSKA: Malta vs England 0-4 (Ingiriiska oo afar dhiibey)
SSC Napoli oo €165m oo euro ku diiddey Lorenzo Insigne & Kalidou Koulibaly